विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत, जापानको निर्यात दोहोरो अंकले गिर्यो – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत, जापानको निर्यात दोहोरो अंकले गिर्यो
एजेन्सी, ५ साउन । जापानको निर्यात दोहोरो अंकमा गिरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको तीव्र वृद्धिले विश्वव्यापी व्यापारमा गहिरो प्रभाव पार्दा विश्वव्यापी माग पनि प्रभावित भएको छ । सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको देखिन्छ ।जापान विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । यदि त्यहाँ मन्दी छ भने विश्वव्यापी आर्थिक अवस्था खराब हुनेछ । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो र त्यहाँको अवस्था पनि पातलो छ । जापानबाट कार र अटोपार्ट्सको मागमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
कोरोनालाई विश्वव्यापीरूपमा नियन्त्रण गर्न मार्चमा लकडाउन लागू भएपछि कार र अन्य टिकाउ सामानहरूको माग एकदमै कम भएको छ । व्यवसायहरू बन्द गर्नुपर्यो भने मानिसहरु घरभित्र रहनु परेको थियो । धेरै देशहरूले आफ्नो अर्थव्यवस्था खोलेका छन्, तर त्यहाँ कुनै सम्भावना छैन कि यसले एक तत्काल प्रभाव पार्दछ ।
नोरिनचकिन रिसर्च इन्स्टिच्युटका मुख्य अर्थशास्त्री ताकेशी मिनामीले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई भने, निर्यात लामो समयसम्म घट्नेछ । संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य धेरै देशहरूमा कोरोनाको बढ्दो घटनाहरूले गर्दा अवस्था झनै नराम्रो भएको छ । यदि घरेलु र विदेशी माग यस्तै प्रकारले घट्न थाल्यो भने आपूर्ति क्षमता नराम्ररी बिग्रन सक्छ ।
जापानको विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकका अनुसार गत वर्षको जुन महिनाको तुलनामा यस वर्षको जुन महिनामा निर्यात २६.२ प्रतिशतले घटेको छ । जापानको निर्यातमा आएको गिरावट अनुमानभन्दा बढी छ। यस अघि मे महिनामा २८.२ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो। जापानको निर्यात गिरावट सन् २००९ को मन्दी भन्दा बढी छ। जापानमा भएको गिरावट अमेरिकाबाट आएको कम मागको ठूलो असर हो।
सन् २०१८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका जापानको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार थियो भने त्यसपछि चीन, जापानले मुख्यतया कार, मोटर, कार पार्ट्स र चिप मेसिनरी निर्यात गर्दछ । जापानको चीनसँगको निर्यात ०.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
जापानबाट चीन जाने सामानहरू मुख्यतया चिप निर्माण मेसिनरी र रासायनिक सामग्री समावेश रहेको जनाइएको छ ।
एशियामा जापानको १५.३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । युरोपियन युनियनमा २८.४ प्रतिशतले घटेको छ । जापानबाट सामानको मागको गिरावटले त्यहाँको तेल आयातलाई पनि असर गरेको छ। जुनमा जापानमा तेल आयात १४.४ प्रतिशतले घटेको छ।
सार्है दुःखद खबर,वरिष्ठ संगीतकार उदय शमशेर राणाको गए राति निधन!!वैकुण्ठ को बास होस!!